Moe Kai: Facebook
အဲ ဒီမှာ Like ဆိုတဲ့ Button လေးအကြောင်းလဲ ပြောရဦးမယ်။ တခါတလေကျတော့ ဘယ်လို ကွန်မန်.ပေးရမှန်း မသိလိုက်တော့ Like ဆိုတဲ့ ဟာလေးကိုဘဲ သိပ်စဉ်းစားစရာမလို နှိပ်လိုက်တာပေါ့နော့။ ဥပမာ တယောက်က ဟင်းတွေ အများကြီး ချက်ပြထားတော့ Like ... ရုပ်ရှင်သွားကြည့်ဦးမယ် ပြောတဲ့သူကိုလဲ Like .... ဓါတ်ပုံလှလှလေးတွေ တွေ.တော့လဲ Like ... အဲလိုမျိုး အဆင်ပြေတာ။
ဒါပေမယ့် Like လုပ်တာ လွန်သွားတာမျိုးတွေလဲ ရှိတတ်ပါတယ်။ ဥပမာ တလောက ကျမ facebook မှာရေးမိတာ “အဖျားတွေ တက်နေတယ်၊ နေမကောင်းဘူး” ဆိုတော့ သူငယ်ချင်း တချို.က ဝင် Like လုပ်ထားတော့ ကျမမှာ “အမ် ငါနေမကောင်းတာ ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းကို ဝမ်းသာပြတဲ့ သူတွေလဲ ရှိပါလား” လို.တောင် ထင်မိပါသေးတယ်။
ကျမတင် မဟုတ်ပါဘူး၊ တခြားသူတွေရဲ့ Status တွေမှာလဲ မကြာခဏ အဲလို Like လုပ်ထားတွေ တွေ.မိပါတယ်။ ဥပမာ
- နေမကောင်းဘူး၊ ဆေးရုံတက်နေရတယ် .... Like
- ရည်းစားနဲ. ပျက်သွားပြီ။ အသဲကွဲနေတယ် ..... Like
- ကိုဘယ်သူ ဒီနေ.ပဲ ဆုံးသွားပြီ ..... Like
- စိတ်ညစ်တယ်၊ ဘာလုပ်လုပ် အဆင် မပြေဘူး .... Like
- ခေါင်းကိုက်လိုက်တာနော် .... Like
- အလုပ်ပြုတ်လာတယ် ..... Like
ပြောစရာတွေကတော့ အများကြီးပါဘဲ။ ကျမမှာ တခါတလေ ရယ်ရ အခက် ငိုရ အခက်။ တခါတလေ တချို.တွေများ ဘာမှတောင် မဖတ်ကြည့်ပဲ Like လုပ်လိုက်သလားလို.လဲ စဉ်းစားမိပါတယ်။ ဒါမှမဟုတ် အင်္ဂလိပ်စာကို သိပ်မနားလည်လို.လား ဆိုပြီးတော့လဲ သူငယ်ချင်းတယောက်က ပြောဖူးပါသေးတယ်။
အဲတချို.တော့လဲ့ ဒီ facebook နဲ. ပြဿနာတက်တာ။ အသိတယောက် နေမကောင်းဘူး ဆိုပြီး အလုပ်မသွားပဲ၊ ပါတီမှာ ပျော်မြူးနေတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေ facebook ပေါ်ရောက်သွားတော့ အလုပ်ပြုတ်တာမျိုးပေါ့။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် ကျမ အနေနဲ.တော့ Facebook လိုမျိုး twitter လိုမျိုး social network တွေ ရှိတာ ကမ္ဘာရွာကြီး အတွက် အလွန် အသုံးတဲ့တဲ့ တိုးတက်မှုလို.ပဲ ထင်မိပါတယ်
မှတ်စု။ ။ ရေးချင်တာတွေကတော့ အများကြီးပါ။ အချိန်က ဘယ်လိုမှ မရနိုင်တော့ အခုတလော post တခု ရေးဖြစ်ဖို.ကို အတော့်ကို ကြိုးစားနေရပါတယ်။ သူများတွေ တနေ. blog post တခုရေးနိုင်တာ အရမ်းကို အားကျမိပါတယ်။